စာချုပ် - သန္ဓေသားယောက်ျားကိုဘွားမြင်မှုအတွက်လိုအပ်သောသားအိမ်ကျုံ့။ မမှန်သော, စစ်မှန်တဲ့နှင့်မှားယွင်းသောအလုပ်သမားအကြားခွဲခြားပြီးသားပေးပို့မတိုင်မီ 2-3 ပတ် 20 ပတ်ကြာနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏ (Braxton Hicks ကျုံ့) ကပေါ်လာပါသည်။
ဤအကျုံ့၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျင်မြန်စွာ pass နှင့်များ၏ထုတ်ဖော်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမထားတဲ့သားအိမ်အတွင်းမွေးဖွားတင်းမာနှင့်နာကျင်ကိုက်ခဲနာကျင်မှုရှေ့မှာပေါ်ပေါက် သားအိမ်ခေါင်း ။ သို့သော်ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွားဆင်တူမီ, နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအလုပ်သမားကျုံ့ start တိုက်ပွဲ - ကလေးမွေးဖွားကြားကာလမတိုင်မီအောက်ပိုင်းဝမ်းဗိုက်နှင့်ကျုံ့အတွက် hardening နှင့်နူးညံ့ကြင်နာမှုပေါ်လာပြီးတော့သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားကွဲပြားခြားနားနေပေမည်။ မွေးဖွားခြင်းဝဒေနာ 15 မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း၏ကြားကာလမှာကြာရှည်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။
ဖျေါပွခကျြကျုံ့မှေးဖှားမီတိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည်: - ဝမ်းဗိုက်အတွင်းပြင်းထန်သောနာကျင်မှုမှ, အသေးစားနာကျင်မှုထဲကနေရာသီကာလအတွင်းအဖြစ်ကဝမ်းဗိုက်အတွင်းရှိထွင်ထားတဲအတွက်နာကျင်မှုနာကျင်မှုနာကျင်ကိုက်ခဲရဲ့အောက်ပိုင်းကိုပြန်အတွက်ပြင်းထန်မှုကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ မမွေးခင်မိစ္ဆာကျုံ့နှင့်ကျုံ့၏တစ်ဦးကထူးခြားတဲ့ feature ကိုသူတို့ရဲ့ပုံမှန်နှင့်ကြိမ်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်မှုမပြုမီစာချုပ် တစ်မိနစ်မှ 5-10 စက္ကန့်အထိကြာနိုင်ပြီး, သားအိမ်ခေါင်းအပြည့်အဝဖွင့်လှစ် 1-2 မိနစ်တိုစေနေသည်နှင့်အတူကြိမ်နှုန်းတဖြည်းဖြည်း, 15 မိနစ်ထက်ပို၏ပထမဦးဆုံးအကြားကာလလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းကိုဖွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီးထိုသူငယ်ကိုဘွားမြင်၏ - မမွေးခင်ကျုံ့များ၏ကြာချိန်နှင့်အတူတူပင်နှင့်တစ်ဦးတစ်မိနစ်မှပမာဏအကြားကြားကာလလျှင်။
အလုပ်သမားများ၏စတင်ခြင်း - လက္ခဏာများ
မွေး Start ကို - ပဲရန်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဦးဆုံးအဆိပ်သင့်အလားတူအစာအိမ်ဒါမှမဟုတ်အူထဲမှာနာကျင်မှုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုအခါရှိသေးသူမ၏လည်ပင်း၏ထုတ်ဖော်ရန်ဦးဆောင်ပြီမဟုတ်သည့်မမှန်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်နာကျင်သားအိမ်ကျုံ့ဖြစ်ကြ၏ပေမယ်ချွဲ plug ကိုကထွက်လာပါတယ်။ ဒါဟာအမြှေးပါးတစ်ခုမဟုတ်ဘဲအချိန်မတန်မီကှဲထှကျညွှန်ပြစေခြင်းငှါအရာ, ကြဲကြဲဥတုအဝါရောင်သို့မဟုတ်အဖြူချွဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ရိနာစွဲ, ကြဲကြဲအညိုရောင်, ဒါမှမဟုတ်အသွေးနှင့်ရောနှောပါလျှင် - ကချက်ချင်းဆေးရုံသွားဖို့လိုအပ်ပေသည်။
မှားယွင်းသောကျုံ့အနေဖြင့်စစ်မှန်သောခွဲခြားရန်, ကမည်သို့မွေးဖွားရှေ့တော်၌ထိုရန်ပွဲကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အတွက်အပြည့်အဝသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ dilatation သည်အထိ - ပျှမ်းမျှ 12 နာရီမှတက်တတ်၏။ သားအိမ်ခေါင်း 10 စင်တီမီတာအထိဖွင့်လှစ်ပေမယ့်ဒီကိုချက်ချင်းမဖွစျနိုငျပါရှိပါတယျ။ ထုတ်ဖော်နှေးနှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာရှည်ကြောင်းပုံမှန်အစည်းအဝေးကျုံ့နှင့်အတူစတင်မဟုတ်ဘဲအလွန်နာကျင်သည်မိနစ် 20 ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျုံ့အကြားအချိန်ကိုသတိပြုပါရန်လိုအပ်သည်နှင့်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်မှတ်နာရီနှင့်အတူကမှေးဖှားမီတစ်ဦးရန်ပွဲကြာမည်မျှစက္ကန့်ပါသေးတယ်။ သူတို့ကိုအကြားအဖြစ်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ dilatation ကြားကာလကိုတိုစေ, စစ်ကိုယ်တိုင်ကရှည်ကြာနေသည်။ ကျုံ့အကြားကြားကာလအကြောင်းကို2မိနစ်နှင့်မိနစ်မှတက်ဘို့ကြာနေလျှင် - သားအိမ်ခေါင်းအပြည့်အဝပွင့်လင်းသည်ထိုသူငယ်ကိုတစ်နာရီအတွင်းမွေးဖွားကြလိမ့်မည်, ဤအချိန်တွင်သင်ဆေးရုံအတွက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သားစဉ်မြေးဆက်အငိုက်ဖမ်းမိကြသည်မဟုတ်ကြောင်း, ထိုကြောင့်ကျုံ့နှင့်၎င်းတို့၏ကြာချိန်အကြားအချိန်ကြာရန်အရေးကြီးပါသည်။
ပုံမှန်ကျုံ့၏အစအဦးနှင့်အတူ, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာဆေးရုံသွားဖို့ရှိသည်။ သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးကိုရရှိသည့်အခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သားအိမ်ခေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဆနျးစစျ, လိုအပ်ပါကပေးပို့များ၏နည်းပရိယာယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အပိုဆောင်းသုတေသနခန့်အပ်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့အမျိုးသမီးတွေအနားယူနှင့်အများဆုံးအဆင်ပြေအနေအထားကိုယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအာရုံကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ခုခုလုပ်နိုင်အောင်သားအိမ်ခေါင်းအပြည့်အဝဖွင့်လှစ်ရန်မတိုင်မီကကြိုးပမ်းလုပ်လို့မရပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်မိနစ် ယူ. ကြားကာလမှာကျုံ့အကြားတဖြည်းဖြည်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာအသက်ရှူနှင့်အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအသက်တော်ကိုပြောင်းလဲ။
ဝမ်းဗိုက်၏ sacrum သို့မဟုတ်အလင်းလေဖြတ်တစ်ဦးလျှော့ပေါ့အနှိပ်လည်းဖြေလျော့ဖို့ကူညီပေမယ့်ပူပြင်းတဲ့ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းမဟုတ်နိုင်ယူ။ ခဏကနေကလေးမိခင်နှင့်ကလေးနှစ်ဦးစလုံးရောဂါကူးစက်နှင့်ပြဿနာများမှဦးဆောင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ခြောက်သွေ့သောကာလအဖြစ်, 24 နာရီအတွင်းမွေးဖွားရပါမည် - အမြှေးပါး၏ကှဲထှကျဖြစ်ပျက်အချိန်ကိုသတိပြုပါရန်သေချာစေပါ။
အဘယ်အရာကိုနေ့ရက်တွင် cesarean ပြီးနောက်ဆေးရုံကဆင်းနေကြသနည်း
ဘယ်လောက်ကြာကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် lochia နေကြသနည်း
Cesarean ပြီးနောက်ကော် - လက္ခဏာများ
Elective cesarean အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသက်တမ်းတွင်?
ကလေးမွေးဖွားပေးခြင်းပြီးနောက် Stretch Marks - လမ်းပိုင်းအမှတ်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
မွေးဖွားခြင်း၏ရှေ့ပြေး - မကြာမီကလေးမွေးဖွားပေးလတံ့သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဘယ်လို?
Gerard Butler နှင့်မော်ဂန်ဘရောင်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအခွင့်အလမ်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်
Parameters Kim Kardashian
ကလေးများအတွက် Sinusitis - ရောဂါလက္ခဏာ
အဘယ်မှာရှိ guanabana ကြီးထွားလာ?
ကက်သရင်း Heigl မွေးဖွားပေးခြင်းပြီးနောက်မိမိအအစားအသောက်များတွင်၏ရလဒ်များကိုချွတ်ပြသ
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ငရုတ်သီး - ချက်ပြုတ်နည်းများ
Cosplay - အဘယ်အရာသည်နှင့်မည်သို့နာမည်ကြီး cosplayer ဖြစ်လာသလော
မော်စကို Petrovsky နန်းတော်